Iyo Inotumira Yakakodzera Nguva Pamhepo Inofambisa Ekushambadzira Maitiro emaHotera | Martech Zone
Inotumira Yakakodzera Nguva paInfluencer Kushambadzira Maitiro eHotera
Chipiri, January 23, 2018 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Yikes… kana usati waona mamiriro achangobva kuitika pakati pekumuka kwemagariro enhau anokurudzira Elle Darby naPaul Stenson, muridzi weDublin weWhite Moose Café neCharleville Lodge. Rini Elle Darby akafunga kuenda kuzororo, akasvika kumahotera akati wandei angave anofarira kugara paari kuti aone kana vachizopa kugara mukutengesa kune vamwe vanhu kuburikidza nevateereri venhau.
Hapana ari kukumbira masendi angu maviri, asi ini ndoda kuapa. Ini ndinotenda pane chekutora kune vese Mai Darby naMnu Stenson:
Kuna Mr. Stenson - Mai Darby vakatsamwa kuti havazivikanwe nebasa ravanoita online kune vatengi vavo. Ini ndinobvuma - vanhu havawanzo kuwana kukosha mubasa uye izvo vanopa zvemukati vanoita. Kana vanhu havawanzo kuziva hurefu hwenguva nesimba zvawaitora kusvika padanho repesvedzero. VaStenson vaisafanira kuenda kuruzhinji nekurwisa Mai Darby.
Kuna Ms. Darby - Ndakaziva uye ndanga ndiri shamwari nevazhinji varidzi vevaeni. Iri ibasa rekusatenda kwaunoshanda mazuva manomwe pavhiki uye unotarisirwa kupa 7-nyeredzi sevhisi kune izvo dzimwe nguva 5-nyeredzi mari. Fungidzira uchishanda kwemakore kuti uwane iyo nzvimbo yezviroto zvako chete kuti ugare uchikumbirwa kakawanda nevanhu vanoda tengeserana kushanda nesimba kuti uburitswe pachena. Kunyangwe iwe uchiziva kuti vakadzikisira zvakanyanya kukosha kwaunogona kuvapa ivo, ndinotenda unogona kunge uri kushomeka kushingirira kwavakatora kuvaka kwavo masimba uye kutendeka muindasitiri yavo inokwikwidza.
VaStenson vanoita kunge vari kuwedzera pasi mukana wekuchengeta mumisoro yenhau, vachibhadhara Amai Darby yekutepfenyurwa kwenhau kune tune yemamirioni emadhora 6.5. Ah, uye atangisa mutsetse wehembe zvakare.
Ini handitende kuti aya mamiriro ezvinhu apo kutendeka kwesocial media pesheni kuri mukutamba kana kuti kana kwete kana iri indasitiri yakatendeka. Aya anongova mapato maviri asingazive kukosha kweyekupa kweumwe neumwe. Sevose vari vaviri vanopesvedzera uye munhu webhizinesi, ini ndinomira uye ndinogadzika kumisangano yekuita seizvi. Mhinduro yangu haina kusarudzika, asi inoramba ichibatsira mukurumbira wangu. Hezvinoi…
Kwete, maita basa.
Yup… ndizvozvo. Hapana manzwiro anokuvadza, hapana invoice, hapana kuratidzwa kuruzhinji, hapana kurwiswa nevarwi vezvemagariro ... mhinduro yakapusa.
Izvo zvakati, ini zvakare handisi kuoneka mune gumi nemana zvinyorwa mukati memakumi maviri nyika.
Zvandinotora pane izvi ndezvekuti Mai Darby naVaStenson vangangoda kubuda uye kunopemberera pamwe chete, ivo vese vawana zvakapfuura kukosha kwavo mukushambadzira kwekuyedza kwavo. Izvo zvakati, ini handina chokwadi chekuti chero bato rakaunza kunzwira tsitsi, kuremekedza, kana kuyemura kwavanogona kunge vachifunga kuti vakaita. Kuona mamiriro ezvinhu ndichiona kumashure, sezvandiri kuita, zvinogara zviri nyore saka handisi kushora chero bato… ndichingopa mhinduro kune vanokurudzira uye mahotera vanogona kuzviwana vari mumamiriro akafanana.
Mahotera uye Influencer Kushambadzira
Iwo mareti akajeka zvakajeka kuti kushambadzira kwekusimudzira kunogona kunyatso kushanda kumahotera. Rhythm One yakaona kuti pamadhora ese e1 akashandiswa kushambadzira kwevanokurudzira, $ 2.26 mune yakapihwa kukosha kwemidhiya yakadzoserwa Kupfuurirazve kutsigira kupihwa kwaMai Davis, 63% yevatengi veEuropean vakaona kuti maonero akatumirwa pamhepo uye kurudziro ndiwo maviri akanyanya kutevedzwa pamafomati kana zvasvika pekugara kwehotera [/ bhatani]
Maitiro angu pachedu ekushambadzira kushambadzira akasiyana zvakanyanya kupfuura mazhinji, asi anondiponesa kubva kumatambudziko ari pamusoro. Ini zvangu kumakambani ndeichi - rega ndiise izwi kunze uko tigoona kuti zvinoshanda sei. Nemahotera, izvo zvakati siyanei mukuti kugara kwako kwaive kwemubhadharo kuhotera. Zvichida chibvumirano chingadai chakaiswa munzvimbo mai Darby yavakapa kubhadhara mari yekugara - asi vaida kuvazivisa kuti vaive nesimba muindastiri yavo. Ipapo angadai akapa muripo kana kudzoreredza zvichienderana nemhinduro. Chinhu chakadai,
“Nharaunda yandakasimudzira pamusoro pemakore apfuura inoteerera zvandinogadziridza uye mazhinji acho anosungirwa kuenda kuzororo padyo nepokugara kwako. Kana iwe uchifarira, ndingafarire kunyora nezve kugara kwangu uye kana zvichikugadzirira bhizinesi rekuwedzera iwe pamwe isu tinogona kurongedza yakaderedzwa kana yemahara mwero mune ramangwana. Kunaka kunoziva kuti ndinogara ndakagadzirira kuDublin! ”
Kwete kuoma zvachose, handiti? Hapana chakaipa, hapana chakaipa… chingori chibvumirano chepamberi chinogadza tarisiro uye chinokumbira mhinduro. Uye "Kwete, ndatenda." Mhinduro yakakodzera chose.
Ko Hotera Inoyera Sei iyo ROI Yekusimudzira Kushambadzira?
Iyi infographic kubva IEurope inoita basa rakanakisa rekubatsira Vashambadziri veHotera kuti vanzwisise kudzoka, maitiro, uye maitiro ekuyera kukanganisa kwekushambadzira kwevanokurudzira. Mr. Stenson vangangoda kutarisa! Mushure mekunge Mai Darby vatumira, angadai akamirira mavhiki mashoma uye achifananidza zvawanikwa nezvimwe zvekushambadzira zvaanga achibhadhara, achinyatso tarisa:
kupana nduma - iyo nhamba yekuda, makomendi, uye mhinduro neanokurudzira.
Hutachiona - kangani zvirimo zvakagovaniswa uye kutumidzirwazve.
Followers - kukura kana kumhanyisa muhuwandu hwevateveri mushure mekutaurwa.
Basa - dzimba dzekugara kwenguva.
motokari - traffic kune iyo hotera webhusaiti.
Svika - vangani vanhu vese vakaona iyo positi (s).
Kuzivisa: Ini handina chandakagamuchira chekugovana iyi hombe infographic kubva kuEurope! Kana ini handina kunge ndabatana naAmai Darby kana VaStenson.
Tags: elle darbehoteraindasitiri yehoterahotera inokurudzira kushambadzirakushambadzira kwehoterakushambadzira kushambadzirakuuraya mahoteraPaul stensoneuropefambatravel industryWhite Moose Café uye Charleville Lodge
Coggle: Nyore, Inobatana Bhurawuza-Yakavakirwa Pfungwa Mepu
5 Zvishandiso Zvinotyisa Zvemukati Kushambadzira Minimalists